Awuqoshwe nangezilimi zethunga umlando webhola - Bayede News
KUNGAKUHLE ukuthi umlando webhola ubhalwe nangolimi lwethunga ukuze nezizukulwane ezilandelayo ziwubone esikhathini esizayo. USolwazi uMazisi Kunene wakwazi ukubhala izinkondlo ngolimi lwesiZulu esahlala e-England kwaba nguye futhi ozihumushela olimini lwesiNgisi. Uma ngibuyela ebholeni, abantu abangakwazi ukulondoloza lo mlando ngababhali bezemidlalo ikakhulukazi labo ababevele sebeyibambile kusuka ngeminyaka yowe-1960 kuze kube yimanje.
Baliyeka ithuba lokuqoqa umlando webhola ekubeni babenazo zonke izinsiza zokubhala umlando webhola. Ngaleyo minyaka ibhola lalisadlalelwa eMsizini esigodini sikamaminzela, eCurries Fountain, e-Orlando Stadium eSoweto nakwezinye izinkundla ezazikhona eNingizimu Afrika yonkana. Singajabula nokuthi siwuthole umlando webhola wangonyaka wezi-2010 ngesikhathi semidlalo yeNdebe Yomhlaba kuleli eyayisingathwe egameni le-Afrika.
Kungenzeka ukuthi sebekhona asebewubhalile lo mlando engikhuluma ngawo webhola ngezilimi zebele okuyoba yinto enhle neyosithokozisa kakhulu siyisizwe.
Uyancomeka nomlando webhola owabhalwa ngababhali bezinye izinhlanga njengoPeter Raath encwadini yakhe ethi “Soccer through the years, 1862- 2002”. Ungabhalwa umlando ngamakilabhu ebhola ayephuma ezindaweni zasemakhaya, emalokishini, emadolobheni ngisho nasemahositela imbala kwelikaMthaniya. Kwakuyoba kuhle ukube lo mlando webhola esikhuluma ngawo osencwadini kaRaath wawubhalwe ngowoHlanga owayezibonela yena mathupha ezinye izigigaba zomlando webhola.
Ngalokho angisho ukuthi akube yisithiyo uma umlando ngebhola ubhalwe ngumuntu owayengekho kwenzeka konke lokhu ebholeni, futhi angigqugquzeli ukuthi sibandlulule abanye ngokugigiyela silokhu sichithana nesikhathi sithi babekuphi mhlazana kuqopheka umlando njengoba sebebhala ngawo. Ngikusho lokhu ngoba wena uzokhuluma kanjena nje ekubeni nawe wawunalo ithuba kodwa wangakugqiza qakala ukubhala ngomlando ngisho namanje. Ibhola lalikhonziwe futhi lingenisile nasemahositela. Elinye lamahositela ayaziwa ngebhola iJacobs ngeminyaka yowe-1970 nowe-1980. Waze wavukwa uhlevane uma kuphathwa iJacobs uMnu uPetros Phumuwakhe Mnyandu waseHarding kweseNkosi uMbotho ngowezi- 2013. Phela wayekhumbula ubuhle bokuphathwa ngezandla ezifudumele ngabasemzini waseJacobs ngonyaka we-1980 kuthi intsha eyabe iqhamuka eMlaza ifi ke izodlalela ikilabhu iNew Tigers kababa uGumbi owayebuye abe neqembu lesicathamiya i-Easy Walkers.
Laba bafana ababedlala ibhola eJacobs kwakuthi uma kungoLwesine benze isiqiniseko sokuthi babewuqeda wonke umsebenzi wesikole ngaphambi kokuba baye ehositela. Nakwamanye amahositela njengeWema neSJ Smith ngeminyaka yowe-1965- kuya kowe-1978 kwakudlala iBush Bucks namanye amakilabhu kuseyiNational Professional Soccer League (NPSL). Phela iWema yayigcwala ithi phama abantu baseLamontville isasetshenziswa njengenkundla yasekhaya yeLamontville Golden Arrows ngowe-1975. Njengamanje i-Arrows isisebenzisa iPrincess Magogo Stadium emidlalweni yePremier Soccer League (PSL). Njengebhola, nolimi lungakwazi ukuhlanganisa abantu nezizwe. Indaba yolimi okwakumele lusetshenziswe eNingizimu Afrika kwakungakuhle idingidwe ezingxoxweni zeCodesa ezazimayelana nokuphathwa kwezwe.
Okwenzeka nokwenziwa ngabesifazane kwezemidlalo kuyancomeka
Kuningi okwashiywa kulenga kulezo zingxoxo ikakhulukazi odabeni lolimi njengoba manje sekungasuka umsindo kudonswane ngezihluthu kugxekwane uma kungathiwa akube ulimi oluthile oluzosetshenziswa ukuxhumanisa abaMnyama.
Abantu baseTanzania nabaseKenya okwathi sebenikwe inkululeko yezepolitiki banquma ukuba baxhumane ngolimi lwesiSwahili. AbaseMalawi bakhetha ukuxhumana ngolimi lwesiChichewa.
Ngoba akuyona inkululeko uma sisazigqaja ngolimi lwesiNgisi njengoba benza abanye abahlonishwa ePhalamende. Iqiniso ukuthi abaMnyama abakazisunguleli okungokwabo besebenzise izilimi zabo zebele baze bakhe nemisebenzi yezandla ezokwaziwa njengoba kwaziwa imikhiqizo yasemazweni anjengeChina, iJapan, neGermany.
nguSikhumbuzo Ndlovu Dec 13, 2018